Indlu kwidiliya yakho yabucala - I-Airbnb
Indlu kwidiliya yakho yabucala
I-Posada yethu ikwi-Uco Valley, eyona ndawo idumileyo yewayini eMendoza.
Le ndlu isembindini wesidiliya, kumhlaba oziihektare eziyi-200, ecaleni kweentaba zaseAndes. Ilungele ukuhlala endaweni ethe cwaka, yabucala.
Le ndlu inamagumbi okulala ayi-3 neebhafu eziyi-2,5. Amagumbi anomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu ibe siza kukunika zonke izinto ezisisiseko, njengeetawuli, amashiti nezinto ezinokusetyenziswa kucoceko.
Ikhitshi linento yonke, ibe ungasebenzisa indawo yokubasa umlilo engaphakathi endlini okanye igrili yangaphandle ukuze uziqhelanise nezakhono zakho zokugrilla.
Uza kufumana itafile yeping-pong, i-foosball kunye nemidlalo yebhodi endlwini.
I am from Mendoza, Argentina and I work for a winery as a commercial, hence the travelling. When I travel I usually spend some days fully into the job, and the rest touring around…
USusana noSusana, abakhathaleli bethu baza kube besendlini ukuze bakufumane xa ufika. Indlu yakhe ikwisiqingatha seemayile ukusuka kule ndlu, ngoko baza kufumaneka ukuze bakuncede xa ufuna nantoni na.
Kwakhona, baya kukuvuyela ukupheka "i-Asado yaseArgentina" kunye "neoveni yodongwe", okanye mhlawumbi isidlo sakusasa kunye nesonka esenziwe ekhaya. Nceda undazise kwangaphambili kwaye ndiza kukuxelela iindleko kunye nokufumaneka!
USusana noSusana, abakhathaleli bethu baza kube besendlini ukuze bakufumane xa ufika. Indlu yakhe ikwisiqingatha seemayile ukusuka kule ndlu, ngoko baza kufumaneka ukuze bakuncede…
Ukuzibhalisa xa ufika ibhokisi enesitshixo, umamkeli zindwendwe